Amụma 2014 maka ihu igwe na ntanetị | Martech Zone
Ọ bụrụ na afọ 2013 bụ afọ afọ ojuju na mkpanaka, ikekwe afọ a bụ afọ nke gburugburu. Nke ahụ bụ, itinye ọdịnaya ahụ n'ihu onye ọrụ mgbe na ebe ha chọrọ ya. Anyị anaghị ekwu maka nchọta, anyị na-ekwu maka izipu ozi na njikọta ndị ọzọ.
Ihe omuma a sitere na Netbiscuits na-ebu amụma ahụ. Nkuchi Smartphone na-aga n'ihu na-abawanye, na-enye ike ịrụ ọrụ geolocation na mmụba n'ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ ejikọrọ iji chọpụta ma kpọtụrụ ya.
Anyị nwere ike ịtụ anya ịhụ nnukwu ọchịchọ maka ahụmịhe ahaziri nke ọma nke na-ebute ụzọ onye ọrụ ọ bụla. Dịka otu n'ime nsogbu ndị kachasị eche ụdị na 2014 ihu, otu ijegharị n'onwe ya ga-agbagha-otu otu otu dị mkpa iji soro ndị ahịa ha na-emekọrịta ihe. Dị abụghịzi naanị nke ụlọ ọrụ. Ha na ndi mmadu ha na ha choro imekorita ya, na njedebe nke 2014, nke a gha adi nma karia ka o di na mbu.
Budata akụkọ a taa iji gụọ ndụmọdụ Netbiscuit maka ịrụ ọrụ ọtụtụ ntanetị na-arụ ọrụ nke ọma.
Tags: onoduihe omuma ihe omumaInfographics AhịaMobile na Mbadamba ụrọụgbụ